Biaxially Yakatemerwa Kufa - China Biaxially Yakatemerwa Inofa Mutengesi, Fekitori -Jwell
Biaxially Yakatemerwa Kufa
Iyo inofa yakakosha chikamu cheiyo biaxially yakatarisana cast sheet, yakananga yakasarudza kukanda jira chimiro uye ukobvu kufanana. Iyi biaxially inotarisana nekukanda pepa kufa kutora jasi hanger kuyerera chiteshi dhizaini, uye shongedzera nehunyanzvi komputa fluid kuongorora software, Kuyerera chiteshi CFD kuongorora uye optimization, kuti uwane yakanakisa fluid parameter. Kufa kwekuvhurika kugadziridza kunotora iyo yekudhonza-dhonza mhando otomatiki kufa miromo kugadzirisa, kuburikidza nepamhepo ukobvu geji yeukobvu hweiyo yakaonekwa data kuburikidza nekombuta chirongwa kugadzirisa mushure mezve mhinduro kune yakakosha kufa miromo yekupisa yekuwedzera inodzora mabhaudhi, yekuvhurwa kweiyo kufa miromo ukobvu otomatiki kurongedza zvakanaka, kutonga kwakanaka kwechigadzirwa. Izvi zvinofa zvinoshanda pa: BOPP, BOPS, BOPA, BOPET, BOPI zvigadzirwa nezvimwe.
Iyo yekufa miromo yakatwasuka, kuomarara uye saizi yemuromo unopinza kona yakanangana nehunhu hwezvigadzirwa. Pashure
kuyedza uye kuratidzwa kwakadzokororwa, uchishandisa pfupi-wave kupisa kwemukati kurapwa kuomarara kunogona kushanda mukuvandudza mhando yefa. kuitira kuti kuomarara kwepasi kuomarara, microstructure kunatsiridza, kupfeka kuramba kupfuura kwakajairika kudzima maitiro. Iyo yekufa muromo yakatwasuka uye abrasion kuramba kuri nani.
Yekumhanyisa Yekumhanyisa Mutsara weHDPE Yemvura Pipe / Gasi